Mobile House: Kindle Fire 6.3.1 ကို ROOT လုပ်ရအောင်၊ Myanmar Font ထည့်ရအောင်....( For Kindle Fire Version 6.3.1 )
Posted by Ye Yint Aung at 2:53 PM
Labels: Android ဖုန်း root လုပ်နည်း
tzo pp November 24, 2012 at 6:23 AM
Kindle Font ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖိုဒါအသစ်ဆောက်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီဖိုဒါကို ရှာလို့မတွေ့ပါ..system ဆိုတာကိုလည်း ရှာလို့မရပါ..setting ထဲမှာ language & keyboard ဆိုတာကိုလည်း မတွေ့ပါ.. ကူညီပါဦးခင်ဗျာ.. Root မဖြစ်တာပဲလား မသိပါ.. Root လုပ်တုန်းက2ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ ဒေါင်းလော့ successful လို့ပြပါတယ်.. အဆုံးမှာ waiting device လို့လဲ ပြပါတယ်.အဆင်ပြေမယ်ဆို ကူညီပေးစေလိုပါတယ်..
Mobile House November 24, 2012 at 7:36 AM
root explorer ထဲ ၀င် တဲ့ ချိန် root access တောင်းပါ မယ် မတောင်း ရင် root မဖြစ် သေး လို့ ပါ ။
zawminhtike ko January 14, 2013 at 4:35 AM
version6.2.1 အတွက်ရရင်တင်ပေးပါနော် အကို ဒီနည်းက 6.2.1 အတွက် root မရလို့ပါ ကျေးဇူးပါအကို
SONY Ericsson Live နှင့် Walkman WT19 Root လုပ်ပြီ...
Mobile ဖုန်းအတွက် အထူးထုတ်ထားတဲ့ Modiac Video Conv...
ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးဖုန်း[သို.] Huawei ရဲ. Ascend P1S
GSM (Sony Erisson K-770i) မှာ Internet သုံးလို.ရအေ...
Android ဖုန်းမှ အင်တာနက်ကို ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ဆက်ြ...